Waxaa jiri kara qaraxyo fulkaane ka badan oo adduunka ka diirran | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jiri kara qaraxyo fulkaano badan oo adduunka ka diirran
Marka ugu horeysa waxaan u maleyn karnaa in qaraxyada fulkaanaha aan lagu go'aamin isbedelka cimilada ee meeraha na martigelinaya, laakiin sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay joornaalka sayniska ee 'Geology' ayaa shaaca ka qaaday in dhalaalida barafka ayaa saameyn ku yeelanaya waxqabadka volcanoes.
Laakiin, sidee Si loo fuliyo gabagabadaas oo ah mid xiiso leh oo riwaayado ah baaro dambaska fulkaanaha Iceland, kaas oo lagu keydiyey keydka peat iyo harooyinka jiinka. Sidaa darteed, waxay awoodeen inay aqoonsadaan xilli dhaqdhaqaaq fulkaaneed u dhexeeyey 4500 iyo 5500 sano ka hor.
Waqtigaas, hoos u dhac weyn ayaa ku yimid heerkulka, taas oo sababtay in barafku si dhakhso leh u koro. Xaqiiqadani way "dejin lahayd" fulkaanaha. Si kastaba ha noqotee, Markay meeraha kululaatay mar labaad, tirada qaraxyada folkaanaha ayaa kordhay.
»Marka barafku dib udhaco, cadaadiska dhulka dushiisa ayaa yaraanaya. Tani waxay kordhin kartaa dhalaalka marada, sidoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa qulqulka iyo xaddiga magma ee qolofku taageeri karo, 'ayuu yiri Professor Ivan Savov oo ka tirsan Jaamacadda Leeds, oo ka mid ah qorayaasha daraasadda.
Waxa ugu yaabka badan ayaa ah xitaa isbeddelada yar ee cadaadiska dusha sare ayaa wax ka beddeli kara suuragalka fulkaanaha lagu daboolay baraf. Hal sabab oo dheeri ah oo loo qaado tallaabooyin kasta oo lagama maarmaan u ah kahortagga heerkulka celceliska adduunka ee ka kacaya in ka badan 2 darajo Celsius dhammaadka qarniga.
Haddii aynaan waxba qaban, dhalaalku nagama tagi doono oo keliya iyada oo aan lahayn meelo dhaadheer oo baraf ah oo, hadda, aan ku raaxeysan karno jiilaal kasta, laakiin marka lagu daro inaan la qabsado la noolaanshaha abaaraha daran iyo daadadka, waa inaan sidaas oo kale ku qabannaa qaraxyada volcanic, wax aad u dhib badan.
Si aad u aqriso daraasadda oo dhan, waad sameyn kartaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Waxaa jiri kara qaraxyo fulkaano badan oo adduunka ka diirran